९ बर्षकी बालिका र १९ बर्षकी युवती एउटै घरमा एती ठुलो समस्यामा ( भिडियो सहित )
बाग्लुङ जिल्लाको बडिघाँट गाउँपालिका वडा नम्बर ६ चितचौर निवासी जगतबहादुर घर्तीको दु”खै”दु”खले भरिएको जीवन जिबनकहानिले कसको चाहिँ म”न न”छु”ला र !
एक बर्ष अगाडीमात्र माहिली छोरीले आ”त्म”ह”त्या गरेपछी माहिली छोरी गु”माएका उनको अहिले जेठी छोरी पबित्रा घर्तीको ब्रे”न ट्यु”मर भएको छ ।
९ बर्षकि कान्छी छोरी पार्बती घर्तीको भने मृ”गौ”ला फे”ल भएको छ । कस्तो अचम्म ! भगवानले पनि दु”खि”यालाई नै झन दु”ख थपिदिन्छ्न ।
जेठी छोरी गुमाएका जगतबहादुर अहिले माहिली र कान्छी छोरीको यो अबस्था हुँदा मर्नु न बाँच्नु भएकाछ्न । क”ठै ब”रा ! एकदमै टि”ठ”ला”ग्दो एवम क”हा”ली”ला”ग्दो अबस्था छ यी नानीहरुको ।
जेठी छोरीले त अब जिन्दगीदेखि ह”ष नै खाईसकीछिन, ठुलाठुला सपना सजाएकी उनि स्कुल जान मन लाग्ने तर आफ्नो अबस्था हेर्दा त्यो सम्भब नै नहुने गु”ना”सो गर्छिन उनी ।
क”ठै ब”रा कान्छी छोरिको पनि त्यस्तै छ अबस्था, मात्र नौ बर्षको उमेरमा कि”ड्नी फेल भएका छ्न उनका । उनको पेट पनि फु”लिएको र आँखामुख सबै सु”न्नि”एको छ । ला”चार नानी आफ्नो पेट एकदमै दु”ख्ने”गरेको बताउँछिन ।
हाँस्नेखेल्ने अनि रमाउने उमेरमा आखिर के द”शा लाग्यो उनलाई यो, चल्न चटपटाउन धरी सक्दिनन बि”च”री । एउटै परिवारमा यती ठुलो ब”ज्र”पात हे भगवान किन दियौ तिमिले ? पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
यस्तै,चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–६ जयनेपालचोकमा बिहीबार राति ट्रयाक्टरको ठक्करबाट ट्राफिक प्र’हरीको मृ’त्यु भएको छ ।
मृ’त्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका १४ राधापुर घर भई जिल्ला ट्राफिक प्र’हरी कार्यालय चितवनमा कार्यरत प्र’हरी नायव निरिक्षक अर्जुन पौडेल रहेका छन् । पौडेलको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु भएको हो ।
बिहीबार राति ९ बजे महेन्द्रचोकबाट चोक बजारतर्फ जाँदै गरेको ना ४ त ८८२९ नम्बरको ट्रयाक्टरले विपरित दिशाबाट आइरहेको ना १६ प ३१५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल पौडेलले चलाएका थिए । ट्रयाक्टर सहित चालकलाई इलाका प्र’हरी कार्यालय गितानगरले नियन्त्रणमा लिएको छ ।